Data ọnwụ nwere ike ịbụ nnukwu mgbu na ya mere anyị niile ga-achọ izere ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye iOS ọrụ na onye amalitewo adịkwa data, na-ya ọ bụla ngwaọrụ, isiokwu a bụ maka gị. Anyị ga-ekwurịta ụzọ kasị mma nke na-agbake data si iOS9 ngwaọrụ. Tupu na, n'agbanyeghị na, ka anyị ngwa ngwa buru a lee anya na isi ihe n'azụ data ọnwụ.
Ihe Mere 1: Hardware / Software malfunctions - Ọ bụ a nwapụtaworo na eziokwu na ihe karịrị abụọ ise nke smart ekwentị ọrụ hapụ ha data n'ihi na ụfọdụ ngwaike ma ọ bụ usoro nke. Ọ nwere ike mere ruru ka batrị ọdịda, n'ụzọ nke ngwaọrụ na njikwa ọdịda. Ị pụrụ izere ya site n'ịhụ na gi aka imeri gị iOS ngwaọrụ ekwesị na-elekọta dị nchebe gburugburu ebe obibi mgbe nile. Ọzọkwa, jide n'aka na ị nọgide na-enwe ezu nke batrị zere a mberede na-achọghị na ọdịda.
Ihe Mere 2: User Njehie - Nke a bụ 2nd kasị eji maka ya data ọnwụ, ihe mberede click on Nhichapụ button / nhọrọ bụ niile na-ewe ihichapu ihe dị mkpa data na gị iOS ngwaọrụ. Mmadụ na mberede resetting ngwaọrụ Factory Ntọala nwekwara ike ịbụ otu n'ime ihe ndị mere ọnwụ nke data. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị mepụtara mgbe backups nke ngwaọrụ gị, ị nwere ike dịtụ belata ego nke data furu efu na nke a.
Ihe Mere 3: mebie Software / Ngwa - A merụsịrị coded ngwa ma ọ bụ agadi version nke software na ada ada site n'oge ruo n'oge nwekwara ike ịkpata ọnwụ nke data. Gbaa mbọ hụ na ị na-agachi imelite gị software zere nke a nke.
Ihe Mere 4: Malware ma ọ bụ Viruses - ezie na ọ bụghị na-ahụkarị na iOS ngwaọrụ, ekwe omume nke ngwaọrụ gị ịlụ oria na a virus ma ọ bụ a malware-apụghị kpamkpam chịrị si. Ozugbo oria, ndị a obi omume nwere ibibi data na ngwaọrụ gị n'etiti a kpọrọ ndị ọzọ na-emebi na ha nwere ike ime. Jiri ihe irè antivirus maka kwukwara nchebe na ngwaọrụ gị na-eme ka ọ a mgbe na-adịghị pịa ọ bụla njikọ zitere site na amaghị ọrụ / ngwa wdg izere nsogbu a.
Ihe Mere 5: Jailbreaking - Ọ bụrụ na ị bụ nyochawa ụda, anọ n'ebe jailbreaking dị ka ọ pụrụ ugboelu gị iOS ngwaọrụ bụrụ na ihe na-aga-ezighị ezi na usoro. Ọ ga-abụ nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na-eme dị ka Apple n'ụzọ doro anya agaghị ịgbatị ọ bụla na-akwado jailbroken ngwaọrụ na ị ga na-ekpe na ihu na-emebi na gị onwe gị.
Naghachi furu efu data si aga ndabere faịlụ
Nkebi nke 1: Iji iTunes
Mbụ, hụ na ị na-enwe ọhụrụ version nke iTunes.
Ugbu a, jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na-enyemaka nke data / odori USB.
Na-agba ọsọ iTunes na họrọ gị iOS ngwaọrụ ozugbo ọ pụtara na iTunes window.
Pịa na Weghachi nhọrọ n'ime nchịkọta panel on iTunes.
Na-esonụ na ihuenyo / gbapụta window, pịa na Weghachi button ọzọ. iTunes ga-akpaghị aka weghachi ngwaọrụ gị ugbu a.
Ozugbo gị na ngwaọrụ e weghachiri eweghachi na ọ malitegharia, ị ga-ahụ welcome ihuenyo 'slide melite'. Soro nzọụkwụ dị ka a gwara site Mbido nnyemaaka melite ngwaọrụ gị iji a gara aga ndabere.
Nkebi nke 2: Iji iCloud
Gbaa mbọ hụ na ị nwere ndị ọhụrụ iOS version - Gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update na gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na a ọhụrụ iOS version dị, download na wụnye ya.
Ego ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọhụrụ ndabere dị ma ọ bụ bụghị - Gaa Ntọala> iCloud> Nchekwa> Jikwaa Nchekwa na pịa na ngwaọrụ ndị e depụtara n'okpuru Backups n'ịkwado ụbọchị na size nke kasị nso-nso ndabere.
Melite gị ngwaọrụ - Gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia na họrọ 'Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala' na-amalite. Mgbe ahụ, mgbe na Mbido nnyemaaka, họrọ 'Mee elu ngwaọrụ gị' na 'Weghachi si a ndabere' na n'ikpeazụ nbanye iCloud.
Na-aga na nhọrọ nke 'Họrọ ndabere' wee họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ site na ndepụta nke backups on iCloud.
Nkebi nke 3: Naghachi furu efu data ozugbo gị iOS 9 ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data ozugbo gị iOS 9 ngwaọrụ mgbe ahụ ị na-nri ebe dị ka anyị nwere nanị nri ngwọta maka gị. Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ ngwa na-ike naputa data gị iOS ngwaọrụ enweghị iji iTunes / iCloud. Pịa ebe a ibudata na wụnye ya na kọmputa gị.
Ebe a bụ obere ndepụta ihe niile a dị ịtụnanya software nwere ike ime.
Naghachi niile faịlụ na ụdị - kọntaktị, ozi, videos, photos, ngwa data, ndetu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Naghachi data bụrụ na nke mmebi nke ngwaọrụ, mberede nhichapụ, mbipụta mere ruru iOS nweta nkwalite.
Naghachi data na ikpe nke-acha anụnụ anụnụ, red na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ / mkpọka na ndị ọzọ.
Naghachi data na 3 mfe nzọụkwụ - jikọọ na, ike iṅomi na-agbake.
Nzọụkwụ 1: Ozugbo ị ibudatara na arụnyere Wondershare Dr.Fone na kọmputa gị, ẹkedori ya na jikọọ na gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa dị ka mma.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, pịa Malite iṅomi na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị, ozugbo ọ e ahụrụ site Dr.Fone software.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo scanning na dechara site Wondershare Dr.Fone, software kwesịrị na-akpaghị aka depụta niile ihe na-agbake, nke kwesịkwara họrọ ndabara. See button Naghachi iji malite usoro nke na-agbake niile data gị iOS ngwaọrụ.
Otú nyefee Data si ZTE ka iOS Devices
Otú nyefee Data si iOS Devices ka Acer ekwentị mkpanaaka na
Olee otú Hichapụ Photos on iOS effortlessly
> Resource> iOS> Olee naghachi Data si iOS 9 Devices (iPhone / iPad)